ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုဟောကြားသော သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားပွဲ ဩဝါဒ ~~~~~~ | Radio Veritas Asia
ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘိုဟောကြားသော သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားပွဲ ဩဝါဒ ~~~~~~
Sermon preached by Cardinal Charles Maung Bo., Archbishop of Yangon, Myanmar.
[ပထမကျမ်း- ထာဝရဘုရားသည် အထက်ကောင်းကင်ပေါ်၊ အောက်အရပ်မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုငှင်း၊ အခြားတပါးသောဘုရား မရှိကြောင်းကိုငှင်း ယနေ့သိမှတ်၍ နှလုံးသွင်းမိကြလော။
(တရားဟောရာကျမ်း ၄း၃၂-၃၄ ၃၉-၄၀)
(ဆာလံ- ၃၃း၅-၆ ၉ ၁၈-၁၉ ၂၀ ၂၂)
ဒုတိယကျမ်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အဗ္ဗ အဘဟုခေါ်ရသော အခွင့်နှင့် အမွေစားအမွေခံများဖြစ်ကြ၏။ (ရောမ ၈း၁၄-၁၇)
ဧ၀ံဂေလိကျမ်း- ကောင်းကင်ဘုံ၌ လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာမြေပေါ်၌လည်းကောင်း စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသမျှတို့ကို ငါ့အားပေးထားလျက်ရှိ၏။ (မာဿဲ၂၈း ၁၆-၂၀)]
ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကို မောင်နှမအပေါင်းတို့-
အဖခမည်းတော်ဘုရား၏ ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ အားသစ် သွန်းလောင်းသော မေတ္တာတို့ဟာ သင်တို့နှင့် အတူရှိပါစေ။ ဒီကနေ့ဟာ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပွဲနေ့ကို ကျင်းပ နေကြပါတယ်။ ထိုသုံးပါးတစ်ဆူးဘုရားတို့အကြား စီးမျှောနေတဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားတွေ အကြောင်းကို ကျင်းပနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ မိသားစုအကြား၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး ကျွန်ုပ်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ထားရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကျင်းပနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုပါ။
ဒီနေ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ ကက်သလစ်အသင်းတော်က မြန်မာပြည်အတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယအကြီးဆုံးနဲ့ အာရှမှာ ပထမအကြီးဆုံးသော ကက်သလစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းမေတ္တာအားဖြင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့အပေါ် သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူ ဘုရားက ဆတက်ထမ်းပိုး ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
ဘုရားတစ်ဆူက ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်နိုင်မည့်အကြောင်းနှင့် ဒီသုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်းများကို ဓမ္မသင်းဂြိုလ် ပညာရှင်များက နစ်ပေါင်းများစွာ ငြင်းခုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီငြင်းခုံခြင်းထဲ ထောင်ချောက်မိဖို့မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက ပေးတဲ့သတင်း စကားကတော့ ရိုးစင်းပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး လေးနက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးအားဖြင့် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မေတ္တာ တရားလိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဆက်ဆံကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ယံရွှေမှုန်ကြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စစ်မှန်တဲ့ အကျိုးပြုသော ဆက်ဆံရေးမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက ပြသပေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ တပါးသူကို ဖိနိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ အပေါ်စီးက ဆက်ဆံရေးမျိုး မဟုတ်၊ တပါးသူကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားက ပြသပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ဝေမျှတတ်တဲ့ အကျိုးပြုတဲ့ ကုသပေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားထောက်ရှုစရာ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန် တွေက ဘုရားကို မိသားစုပုံစံအနေဖြင့် သိရှိနားလည်ခြင်းဟာ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘုရားဟာ ကလဲ့စားချေ၊ နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်တဲ့ တန်းခိုရှင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဟာ ကြီးမြတ်ပေမယ့် လူသား တွေနဲ့ ဆက်ဆံတတ်သော ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိတော်မူသော အဲမာနူးအယ် ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူ့အဖြစ် ယူတော်မူသော ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဆိုတာ နားလည်လို့မရဘူး၊ ဖော်ပြပုံဖော်လို့မရဘူး၊ လူသားတစ်ဦးလို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘာသာရေး တော်တော်များများက သွန်သင်ပေးထားတာပါ။
ဒီနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းဘုရား၊ ပြုစုပျိုးထောင်တတ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကယ်တင်ပေးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကုသပေးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အကြောင်းကို ကျင်းပနေကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလ ကတည်းက မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ကြီးမားတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ ဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ လတ်တလော ကယားပြည် လွိုင်ကော်ဖက်မှာ ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့ ဒဏ်ရာများစွာ ခံစားရပြီး တောထဲထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
ဒဏ်ရာများနဲ့ ငိုကြွေးနေသောသူတွေကို သန့်ှရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူဘုရားက ပေးနေတဲ့ သတင်းစကားက ဘာဖြစ်မလဲ။
ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက ကြီးမားတဲ့နားလည်မှုတစ်ခုကို သင်ပြနေ ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အာဏာဆိုတာ နိုင်ထက်စီးနင်းခြင်းမဟုတ်ပဲ ချစ်ခြင်း မေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားအကြား မတူကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မျှဝေခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြ ပါတယ်။ လည်ပတ်စီးမျှောတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာမပါပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား အားဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိဦးဖဦးဖြစ်တဲ့ အာဒံနဲ့ဧ၀ကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အီဇရာအဲယ်လူမျိုးတွေကို အီဂျစ်ပြည်ကနေ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားတို့အကြား ဖွဲ့စည်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား အကြောင်းကို ရှင်ယောဟန်ကျမ်းစာမှာ တွေ့ရပါတယ်။ “သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူဟူသမျှကို ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်စေဘဲ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်သည်တိုင်အောင် လောကသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏ (ယောဟန် ၃း၁၆)။”
ဟုတ်ပါတယ်။ ခမည်းတော်ဘုရားဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သားတော် ဘုရားဟာ လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာ သိကြားတမန်အားဖြင့် မယ်တော်မာရိယားကို အမိန့်တော်ပြန်တဲ့ အာဏာတန်ခိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ချစ်ခြင်းရဲ့အာဏာတန်ခိုးဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ဖန်တီးတဲ့ အာဏာကို တပ်မက်ချစ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်တွေ အနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူဘုရားအပေါ် လက်ခံယုံကြည်သက်ဝင်မူဟာ ရှည်လျားခဲ့ပါတယ်။ ကနဦး အသင်းတော်မှာ အသင်းတော်က ဘာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အဆင့်ဆင့် မှတ်တမ်းတင်ပြုစုခဲ့ ကြပါ တယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့က ယုံကြည်ခြင်းအချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယုံကြည် ခြင်းအချုပ်မှာ အခြေခံအားဖြင့် အချက်သုံးချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၁.အားလုံးစုံကို တတ်နိုင်တော်မူထသော၊ မိုးမြေတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ ထသော၊ ခမည်းတော်ဘုရားကို ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။
၂. ခမည်းတော်၏ တစ်ပါးတည်းသောသားတော် ယေဇူးခရစ်တော် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ကိုလည်း ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။
၃. သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုလည်း ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏။
- ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာ ခမည်းတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရား၊ ဝိညာဉ်တော် ဘုရား အားလုံး တည်ရှိတာကို တွေ့ရတယ်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲက သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကို ဓမ္မသစ် ကျမ်းစာမှာလည်း အတိအလင်းဖော်ပြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ဆိုတာ မိသားစု တခုလိုပါပဲ။ အာဏရှင်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးမဟုတ်၊ စစ်အာဏာရှင်လို ဦးဆောင်သူမဟုတ်၊ သက်ဦး ဆံပိုင်မင်းလည်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ဆိုတာ ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဘုရားပါပဲ။
ဒီကနေ့ ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာတွေကို နားလည်ပြီး သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူဘုရားတို့မှာရှိတဲ့ ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးများဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ရှိသော ဘ၀ရှင်သန်မှုကို တည်ဆောက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀ထဲမှာ ခရစ်စူးအမှတ်အသား တားခြင်းအားဖြင့် ၀န်ခံနေကြပါတယ်။ ခရစ်စူး အမှတ်အသား တားတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တွေကို ထိရပါတယ်။ ၎င်းသုံးပိုင်းအားဖြင့် ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ဖတ်ရှု ရတဲ့ ကျမ်းစာတွေက သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကို ပိုမို နားလည်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဦးခေါင်း။ ။ နဖူးကို ထိတဲ့အခါ ခမည်းတော်လို့ ရွတ်ဆိုကြတယ်။
နှလုံးသား။ ။ ရင်ဘတ်ကို ထိတဲ့အခါ သားတော်လို့ ရွတ်ဆိုကြတယ်။
လက်များ။ ။ ပခုံးတွေကို ထိတဲ့အခါ သန့်ရှင်းသောဝိညဉ်တော်လို့ ရွတ်ဆိုကြတယ်။
ပထမကျမ်းစာထဲမှာ ခမည်းတော်ဘုရားအကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်။ ဦးခေါင်းဆိုတာ အသိတရားနဲ့ ယုံကြည်ခြင်းတည်ရှိရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကျမ်းစာထဲမှာ မိုးဇက်က ဂျူးလူမျိုးတွေကို နှိုးဆော်ထားတာကတော့ ဘုရားကို သိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်အထက်နဲ့ မြေကြီးအောက်မက နေရာတိုင်းမှာ ဘုရားရှိကြောင်းကို မိုးဇက်က ပြောပြထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းကို ထိတယ်ဆိုတာ ဘုရားကိုသိရှိခြင်းနဲ့ ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် အရေးကြီးသတင်းစကားကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတယ့် အရာအားလုံးအလယ်မှာ ဘုရားရှိ နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘုရားသခင်ဟာ အဆုံးမဲ့ ကယ်တင်လွတ်မြောက်စေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားထက် ကြီးမြတ်တဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ပရောဖက် ဟေရှာယက- အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့အဘို့ သူငယ်ကို ဘွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတော်မူ၏။ ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ နာမတော်ကား အံ့သြဖွယ်၊ တိုင်ပင်ဘက်၊ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူ လိမ့်မည်။ (ဟေရှယ ၆း၉)
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာနေတာ ဘုရားအုပ်စိုးခြင်းပါ။ ပရောဖက်ပြော ထားတာက- ထိုသူသည် အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်။ ဘုရားအုပ်စိုးခြင်း ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ။ ဟေရှာယက အားပေးနှစ်သိမ့်ထားတဲ့ စကားကတော့- ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်၊ နိုင်ငံတော်ကို နောင်ကာလအစဉ်မပြတ် တရားတော်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်စွာစီရင် အမြဲတည် စေတော်မူမည်အကြောင်း၊ အာဏာတော်တိုးတက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်တော် မူခြင်းသည် နိစ္စအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည် အလိုတော်အားကြီး၍ ထိုအမှုကို ပြီးစီးစေတော်မူလိမ့်မည်။ (ဟေရှာယ ၆း ၇)
ထိုကဲ့သို့ ဘုရားအုပ်စိုးခြင်းရှိတဲ့ အစိုးရမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနေတာပါ။ ပရောဖက်က- နိုင်ငံတော်ကို နောင်ကာလအစဉ်မပြတ်၊ တရားတော်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်စွာစီရင် အမြဲတည်စေတော်မူမည်အကြောင်း၊ အာဏာတော် တိုးတက်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်တော်မူခြင်းသည် နိစ္စအမြဲရှိလိမ့်မည်လို့ ပြောထား ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်- ထိုကဲ့သို့ အစိုးရကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းသံနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ညီအစ်ကို မောင်နှမများရဲ့ ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင် နားညောင်းပါစေ။
ဒုတိယကျမ်းစာထဲမှာ- ခရစ်စူးအမှတ်အသားတားခြင်းရဲ့ ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်ကို ထိခြင်းကို ပြောပြနေပါတယ်။ နှလုံးသားဆိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ပလ္လင်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားမှာ ဒုတိယဘုရားက ခရစ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အမိန့်ကတော့- သင်တို့ကို ငါချစ်သလို တစ်ပါးသူကိုလည်းချစ်ကြပါ။ ဒုတိယကျမ်းစာထဲမှာ- စိန်ပေါလ်က ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြွေးကြော်တာကတော့- အကြောင်းမူကား ဘုရား သခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လမ်းပြဦးဆောင်ခြင်းခံရသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့ သည် ကြောက်ရွံ့စိတ် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဘုရားသခင် ထံတော်မှ ကျွန်စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပေ။ သင်တို့သည် သားသမီး စိတ်ဓာတ်ကို ရရှိခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်၏။ အဗ္ဗ၊ အဖ ဟု သင်တို့ ကြွေးကြော်ကြ သောအခါ၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြကြောင်းကို ဝိညာဉ်တော် ကိုယ်တိုင်ကပင် ငါတို့၏ ဝိညာဉ်နှင့်အတူ သက်သေခံ တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ (ရောမ ၈း၁-၁၅)
လမ်းပေါ်မှာ ရက်စက်မူများရှိတဲ့ချိန်၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်၊ ထောင်နန်းစံသူတွေအတွက်၊ တောထဲထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေသူတွေအတွက် ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်မှုမျိုးရနိုင်မလဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်က ဘယ်တော့မှ စွန့်ပစ်တော်မမူပါ။ အမွေစားအမွေခံ သားသမီးများအနေဖြင့် ဒုက္ခဆင်းရဲ အပေါင်းမှ လွတ်မြောက်စေပါမည့်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း အဗ္ဗ၊ အဖေလို့ ခေါ်ဆို တမ်းတကြပါစို့။
တတိယကျမ်းစာမှာ- ခရစ်စူးအမှတ်အသားတားခြင်းရဲ့ တတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ပခုံးများထိခြင်းကို ပြောပြနေပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှု အင်္ဂါရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းဆိုတာ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှလုံးသားဆိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်များရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းကို အပြုအမူအားဖြင့် အမြဲ ဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်။ လက်ဆိုတာ လုပ်ဆောင်ခြင်း သင်္ကေတပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧ၀ံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာ ခရစ်တော်က သူ့တပည့်များကို တိုက်တွန်းထား တာကတော့- ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် သွားကြ၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့၏ တပည့်ဖြစ်စေကြလျက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ၏ နာမတော်မြတ်၌ သူတို့ကို ဆေးကြောကြလော။ (မာဿဲ၂၈း ၁၉)
အသက်ရှင်နေထိုင်မူဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းကို အပြုအမူအားဖြင့် ဖော်ဆောင်ရပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာ နှောင့်ယှက်ခြင်း ခံရပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါက သန်းပေါင်းများစွာကို အစာငတ်စေတယ်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေကလည်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဆင်းရဲဒုက္ခ နောက်တခုဖန်တီးပေးနေပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့ စိန်ခေါ်ချက်- အမှောင်ကာလများ
သမိုင်းမှာ အမှောင်ကာလများစွာရှိပါခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူဘုရားက လူသားတွေအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အီဇရာအဲယ်ဘုရားက သူ့လူမျိုးတွေ အီဂျစ်ပြည်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ မိုးဇက်ကို ခေါ်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရသူတွေအတွက် ဘုရားသခင်ဟာ လွတ်မြောက်စေတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ နတ်ဆိုးက အောင်မြင်တယ်ထင်ရတယ့် အချိန်ကာလ တွေမှာ ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ ညီညွတ်စွာ နတ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်တွေကို တုန့်ပြန်ဖို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက အားပေးထားပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့စေလွတ်တဲ့အမိန့်ဟာ ဓမ္မဟောင်း နဲ့ ဓမ္မသစ် နှစ်စောင်စလုံးမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ငါနှစ်သက်သော အစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသော အချည်အနှောင်ကို ချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခံရသော သူတို့ကို လွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းဘိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော။ မွတ်သိပ်သောသူ ကို စာကျွေးခြင်း၊ နေရာမရှိ၊ ဆင်းရဲသောသူတို့ကို ကိုယ်အိမ်သို့ဆောင်ခြင်း၊ အ၀တ်မရှိသော သူကို မြင်လျှင်၊ အ၀တ်ကို ပေးခြင်း၊ ကိုယ်အသားကို မရှောင်ဘဲနေခြင်း မဟုတ်လော။ သို့ပြုလျှင် သင်၏ အလင်းသည် မိုဃ်းသောက်သော အလင်းကဲ့သို့ ပေါ်ထွန်း၍ အလျင်အမြန် ကျန်းမာခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ သင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပါရမီသည် သင့်ရှေ့၌သွား၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် နောက်၌ လုံခြုံစေလိမ့်မည်။ (ဟေရှယ ၅၈း ၆-၈)
ဟုတ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက နှိုးဆော်နေတာ ကတော့- မတရားသောအားဖြင့် ချည်နှောင်နေတဲ့ ချည်ကျိူးများစွာကို ရိုက်ချိုးခြင်းအားဖြင့်၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသူတွေကို လွတ်မြောက်စေခြင်း အားဖြင့်၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်သူများ၊ ငတ်မွတ် နေသူများနဲ့ အစားစာများ ဝေများခြင်းအားဖြင့်၊ အိုးမဲ့အိမ်မက်ဖြစ်နေ သူများနဲ့ ဘ၀တူခံစားပေးခြင်းအားဖြင့်၊ အ၀တ်မရှိသူများကို အ၀တ်အစား ဝေငှခြင်း အားဖြင့်၊ ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေသူများကို မမေ့မလျောပဲ ကူညီခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ပ်တို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြစို့။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေက မြန်မာပြည်အတွက် ကုသခြင်းတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးမှာပါ။ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့ ချစ်ခြင်းအလင်းတော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မိုဃ်းသောက်ရောင်ခြည်တော် ဖြစ်လာမှာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်းများစွာက သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နဲ့ အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးစိုးတဲ့ နေရာ၊ အာနည်းသူနဲ့ အကူညီမဲ့သူတွေကို ဦးစားပေးတဲ့နေရာတွေမှာ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားရဲ့ ချစ်ခြင်းဟာ ရှင်သန် စီးဆင်း နေမှာပါ။ သန့်ရှင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး တစ်ဆူဘုရားရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ ဘုရား အာဏာစက် အားဖြင့်သာ ရှည်လျားတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲ့ခြင်းကနေ လွတ်မြောက် စေမှာပါ။ ကုသမှုတွေပေးမှာပါ။
ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရှာဖွေဖော်ဆောင်ဖို့ ပရောဖက်ဟေရှာယက ပြောထား ပါတယ်။
ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့နာမတော်၌ ကုသမှုတွေရဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ ရဖို့ ဆုတောင်းကြပါစို့။ အာမင်။
1st Reading Deuteronomy 4:32-34, 39-40: The Lord God in Heavens above and on earth below and there is no other.
Responsorial Psalm Psalms 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22
2nd Reading Romans 8:14-17: The Spirit of adoption makes us cry “Abba, Father”
Gospel Matthew 28:16-20: All power on earth and heaven are give to me.
May the everlasting love of the Father, the redemptive love of Jesus and the creative love of the Holy Spirit be with us all. Today we celebrate the great feast of Holy Trinity,afeast of relationship of love. We celebrate the example of the trinity which lives in circular, nurturing relationship of love. Today we celebrate all our relationships: in the family, in our context. As human beings we exist to relate. This feast affirms that relationship is the core of being divine and being human.
Today is also the country wide prayer for Myanmar by the Philippines Church. A special prayer will be said in that country in every church. The Philippines is the third biggest Catholic country in the world and the biggest in Asia. We are grateful to their great gesture of relating to us through prayer. May the Holy Trinity bless them all abundantly.
Today’s feast isagreat theological challenge. For long time theologians argued how one God can be three and three God can be one. We shall not be trapped in the theological net of arguments. The Holy Trinity message is simple: All of us exist only for relating to one another as the Father, Son and the Holy Spirit exist for one another in deep relationship. The Holy Trinity is also an example of nurturing relationship, not manipulative relationship. The Holy Trinity is also showingacircular model of power not hierarchical model where one or two have monstrous power to subjugate others, persecute others, torture others and kill others. The Holy Spirit gives the example of sharing, nurturing and healing.
This is what we are going to see today in our thoughts about the Holy Trinity. We are grateful that Christianity understood God asafamily. He is notamonstrous, vengeance seeking all powerful entity. Our God is both immanent and transcendent. He is Emmanuel, the God who lives with us and Our Father who is in heaven. He is the incarnate God, of flesh and blood in Jesus. We see our God. Many religions preach God cannot be understood, cannot be described, cannot beahuman.
Let us celebrate this God: of Love; of nurturing Love, of redemptive love, of healing Love.
For the last four months, this nation has undergone huge suffering. Even now the people of Mind at and Loikaw are huddled together in the jungle after violence forced them to flee. With starvation and wounds thousands are displaced.
What is the message of the Holy Trinity to our people’s wounds and tears?
The Holy Trinity teachesagreat concept: The real power is Love. Not Domination. The three persons of the Trinity have different works but their relationship is totally showed by loving and sharing. It isacircular relationship. Power is not involved. The Holy Trinity is moved by Love. It is out of love the world and the first parents were created. It is out of love the Israelites were released from Egypt. The best definition of Trinity’s love is expressed in John 3: 16
not to condemn but to redeem all the world.
Yes. God the Father is Love; his Son is Love; the Holy Spirit is the power when the angel announced the message to Mary. It is the power of Love. Not the Love of Power which is creating hell in many parts of the world.
As Christians we havealong tradition of accepting the faith of the Holy Trinity. The early Church developed creedal statements that expressed what the Church believed. The first was the Apostles’ Creed. The Apostles’ Creed simply affirms in three statementsabelief in God the Father, Son and Holy Spirit:
The Bible isabook that influenced three Abrahamic religions. But Christians take the holistic message of Triune God:
· In the Old Testament, God is Creator of both the world, and of the nation of Israel through whom he will bless the world. Of course, God is present as Spirit, and the Messiah is both prophesied and foreshadowed in various theophanies (appearances of God, such as the angel who wrestles with Jacob). But primary on the stage of the unfolding drama of the Old Testament is the God of Israel, Yahweh, El-Shaddai, Elohim, Adonai, and all the other names by which God is called and worshipped.
· In the New Testament Gospel accounts, the emphasis is upon Jesus- the Emmanuel— his birth, his baptism, his message, his life, his death, and his resurrection. But God the Father approves his Son, and the Holy Spirit descends upon — anoints — Jesus for ministry.
· In the New Testament Book of Acts and the epistles, the Holy Spirit is at the forefront, equipping, enabling, guiding, empowering the early church.
· In the Book of Revelation, God the Father, Son, and Spirit are all present.
The trinity was in the old testament and is found well-articulated in the New Testament. God isafamily. Notaking, Notamilitary leader, not an autocrat. God is relationship.
We are called upon to understand the readings of Today and make our life meaningful in the trinitarian way of living. Every day we affirm the role of the trinity in our life by the sign of the cross. We touch three parts of our body with the sign of the Cross, affirming the role of trinity in our lives. The three parts are: three H: Head, Heart and Hand. Today’s readings are so appropriate in understanding the Trinity through these three H: Head, Heart and Hand.
· Head: We touch our head and say: In the Name of the Father.
· Heart: We touch our heart and say: And of the Son
· Hands: We touch shoulders where our hands start and say: And of the Holy Spirit.
The first reading today talks of the Father: The head is the place of Knowledge, faith. In the first reading: Moses in the book of Deuteronomy calls forth all the Jews to know the Lord “You must Know” says Moses to his people that God is present “in the Heavens above on earth below” Knowledge of God and faith in him is what we seek when we touch our head.
What is the message of these words to Myanmar people : God is present amidst all the troubles we face? He is the ultimate deliverer. There is no government that is more powerful than God. Prophet Isiah affirms :
For to usachild is born, to usason is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counsellor, Mighty God, Prince of Peace. ( Is : 9:6)
Yes. We seek the rule of God, the prophet says the Government is on his shoulders. What happens God’s rule is established? Isiah consoles us withagreat verse :
Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. (Is 6:7)
That kind of Godly government we are praying for. When that comes, the prophet says, peace will be no end and justice and righteousness will rule for ever and ever. Yes. We need to pray for suchagovernment. Let God hear our prayer. The prayers of the Philippines Brothers and Sisters.
The second reading refers to the second act in our sign of the Cross : touching our heart. The heart is the seat of love, symbol of love. The second person of the Trinity is Jesus. His only commandment : Love one another as I loved you. In the second reading today, St Paul proclaims with joy : we are not worshippingafearful, vengeful God. We are praying because we are adopted by the spirit and cry out with joy “ Abba, Father” Truly we are sons and daughters of mighty God. How consoling to hear that when cruelty plays it violent game in the streets. Those who are killed, those who are tortured, those who are in prison, those who fled to jungles as refugees are not ‘abandoned, but adopted as sons and daughters of the living God, whom they can cry out “ Abba, Father” for liberation from all suffering.
The third reading refers to the third act of the sign of the Cross : touching our shoulders and hands. These are organs of DOING. Faith is in Head; Love is in Heart. Christian Faith and Love is always expressed in action. Hands are symbols of doing.
In the Gospels today, Jesus exhorts his disciples : Go, proclaim, baptize in the Name of the Father, Son and the Holy Spirit. Living is loving. Loving is showing in actions. For the last two years, our living and loving one another is deeply disturbed. Covid has made millions poor and starving. The present crisis has created huge suffering to innocent people.
The Trinity challenges us : These are dark moments. In the dark moments of history, the Trinity intervened directly with the humanity. God of Israel called Moses to release his people from the suffocating slavery in Egypt. God is the Liberator of the victims of oppression. God works through us. As the Pope urged us : In times when evil seems to be winning, we need to maintain faith and unity and respond to the victims of evil.
When sin engulfed the world, the Trinity intervened and send the Son. The Holy Spirit was announced to the virgin. Yes, when evil threatens us, the Trinitarian response is not silence, not withdrawal to our safety alone. Jesus tells his disciples : Go. Yes, we need to go where violence has broken human families in this country, where violence has spilled blood, where violence has made thousands displaced into merciless jungles. The mandate of the Trinity was articulated in the old testament and the New testament :
Free those who are abused! Share your food with everyone who is hungry;
Give clothes to those in need; don’t turn away your suffering people.
Then your light will shine like the dawning sun, and you will quickly be healed. (Is: 58:6-8)
Yes, the Trinity inspires us all in this country to “worship the Lord” through removing the chains of thousands who are arrested and held unjustly, free those who are tortured, share food with the millions who lost their livelihood and fled the conflict, sharing your home with those who are fleeing from evil, clothing the naked and never forgetting the suffering people.
Yes. This will bring healing to the nation. Our light of trinitarian love will shine like the dawning sun. Countries in the world struggle against autocratic, hierarchical power but for the emergence of the Trinitarian circular power where love reigns supreme, the weak and vulnerable are given primacy of place. Only through such Trinitarian love and power format, this long-suffering nation can heal itself and find peace as the prophet Isiah proclaimed.
Let us pray for such healing, In the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.